Indlu engasemanzini ngokuphelele - I-Airbnb
Indlu engasemanzini ngokuphelele
Balcolyn, New South Wales, i-Australia
Indlu ebukekayo, enechibi elihle (indlwana yakudala yabadobi) ne-caravan. Indawo engasemanzini ngokuphelele, indawo ethulile, ama-sunsets akhazimulayo, ama-sunris kanye nokubukwa kwamanzi okungu-180-degree amamitha angu- ukusuka emanzini.
Indawo enhle yokudoba (akukho ukufinyelela kwe-jetty).
Igceke elikhulu elingemuva lokupaka.
90Mins kusuka e-Sydney. Imizuzu engu- ukuya esikhungweni sokuthenga nge-Coles/amathilomu. Ikamelo lokulala eliphambili libheke ukubukeka kwechibi. Amanye amakamelo amabili anama-bunks & afinyeleleka ngaphandle ku-verandah.
I-Caravan ihlanganisa inani futhi inezindawo ezinhle zokubukwa.
Indlu inhle, ipholile futhi ingeyasemaphandleni. Ikhishi elinomshini wokugeza izitsha namagumbi okugezela angu-2 (ngaphandle okukodwa).
Amakamelo okulala alula, ikamelo lokulala elikhulu libheke ukubukeka okumangalisayo kwechibi. Amanye amakamelo amabili anemibhede emincane futhi lawa makamelo amabili afinyelelwa ngaphandle ku-verandah. Sicela wazi ukuthi lesi sakhiwo kungenzeka singafaneleki ezinganeni ezincane.
I-Caravan ihlanganisa inani futhi inekhishi elisebenzayo nendlu yangasese. I-Caravan inokubukeka okuhle kwechibi ukusuka embhedeni olala abantu ababili.
4.58 · 45 okushiwo abanye
Omakhelwane abanobungane emndenini. Uzobona abantu behamba ngomkhumbi, behamba ngesikebhe futhi bedoba echibini.
I-Coles, amathilomu, izindawo zokudlela nezitolo ngemoto nje emfushane ukusuka endlini.
Ukuhambahamba emahlathini okuthandekayo eduze.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-13431
Hlola ezinye izinketho ezise- Balcolyn namaphethelo